Asylum: chiitiko chitsva chinotyisa cheLinux | Linux Vakapindwa muropa
Asylum: chiitiko chitsva chinotyisa cheLinux
Kana iwe uchida manzwiro akasimba uye nyaya dzinotyisa, iwe zvechokwadi uchapedza anoshamisa maawa mashoma uchitamba uyu mutambo unonzi ASYLUM. Uyu mutambo wevhidhiyo, uyo uchave unowanikwawo paWindows uye macOS, ichasvikawo mumazuva mashoma eLinux. Saka unogona kunakidzwa neruzivo urwu.
Inogona kutengwa muchitoro cheGOG kana muchitoro Valve Steam. Mutambo wevhidhiyo uko kunoshamisa nekushamisira ndiyo kosi huru yenyaya iyi nyowani. Demo rinosvika kubva munaJune 16 kusvika 22 kwaunogona kutamba kusvika kumaawa maviri kuti uone chiitiko ichi uye uchienderana neiyo Steam Game Mutambo.
ASYLUM iri wekutanga zita remunhu uye nechitaera chakafanana nemamwe mabasa kubva kuma80s, ane zviitiko zvakadhirowewa zvakafemerwa neLP Lovecraft nemamiriro ake ekutyisa munhau dzake dzakakurumbira. Kana iwe uchitamba, hauzongoona chete iyo inotyisa hunyanzvi, iwe zvakare uchakwanisa kugadzirisa mamwe mapuzzle ayo anozoedza hunhu hwako uye dexterity, uku uchiita zvese zvaunotarisira kubva kune inonakidza vhidhiyo mutambo.
Iyi yepfungwa inotyisa yevhidhiyo mutambo yakagadzirwa kubudikidza Senscape, kambani yeBuenos Aires yemazita ezvinzvimbo. Munyori mukuru ndiAgustín Cordes, akagadzirawo mamwe akadai seMitsara, nezvimwe. Uye zvakare, ivo vakashandisa inozivikanwa Unity 3D mifananidzo injini kuitira kuti igone kushanda pane akasiyana mapuratifomu, senge Android uye iOS.
Iyo mari yeASYLM mune yayo mhomho yekutsvagisa vanhu pane inozivikanwa Kickstarte chikuva chaenda zvakanaka kwazvo. Muchokwadi, yanga iri imwe yemakambani akanakisa akaitwa kubva kuArgentina, nzvimbo yevagadziri vayo. Ivo vakapfuura vavariro yavo ye $ 100.666 (kunyanya, yakasvika pa119.426, izvo zvinoita kuti vakwanise kuva nemari yekukwanisa kuipinza kumapuratifomu enhare zvakare). Izvo zvinokupa iwe zano rekuti zvirimo zviripo, saka iwe unofanirwa kuzviedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Asylum: chiitiko chitsva chinotyisa cheLinux